Akkaataa tokko fayyadamuuf:
Barruu fili. Jecha tokkoof Akkaataa Arfii tokko fayyadamuuf, jechicha irra cuqaasi. Akkaataa Keewwataa tokko fayyadamuuf, keewwaticha irra cuqaasi.
Fuulaa caancalaa irraa Meeshaalee - Maamileesi - Gabateecuqoo Akkaataawwan dhaaf furtuulee quxxamuraa ramaduu nidandeessa.
Haalataa Dhangii Guuti
Filannoo irraa Akkaataa haaraa
Galmee ka birroo irraa akkaataalee alaaguuf, qaaqa Akkaataawwan Fe'iinsaa bana.